chanterelles | ထမင်း မီးဖိုချောင်ချက်ပြုတ်နည်းများ
မာရီယာ vazquez | 25/12/2021 10:00 | မှိုနှင့်အတူချက်ပြုတ်နည်းများ
chanterelle သည် holm oaks သို့မဟုတ် oaks များအနီးတွင်တွေ့ရှိရပြီး ပထဝီဝင်ဧရိယာပေါ်မူတည်၍ နာမည်အမျိုးမျိုးယူနိုင်သော မှိုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏တောက်ပသောအရောင်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင့်ပြင်ဆင်ရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ စွပ်ပြုတ်များ၊ casseroles နှင့် ငံပြာရည်များ. chanterelles နဲ့ ဒီဆန်လိုမျိုး ထမင်းရှိရင်။
Chanterelle ရာသီ စပိန်တွင် နွေဦးနှင့် ဆောင်းဦးရာသီဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို သင့်တင့်မျှတသောစျေးနှုန်းများဖြင့် စျေးကွက်တွင် လောလောဆယ် ရှာဖွေနိုင်သည်။ ဒီထမင်းကို လူလေးယောက်အတွက် ပြင်ဆင်ဖို့ အများကြီး မလိုအပ်ပါဘူး။ ကီလိုဝက်နဲ့ဆို လုံလောက်ပါပြီ။
ဒီထမင်းမှာ စေတနာရှိရမယ်။ မှိုပမာဏနှင့်အတူ။ ထို့အပြင်၊ ယခုအချိန်တွင် သင်တို့အားလုံးသည် တခါတည်းပြုတ်ထားသော မှိုများနည်းသွားသည်ကို တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ စစ်ဆေးကြည့်ကြမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့အမေက နင်ဘာပြောပြော၊ ဤထမင်း၏ကျန်ပါဝင်ပစ္စည်းများသည် အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်- ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ငရုတ်ကောင်းနှင့် ခရမ်းချဉ်သီး။ စတင်ပြင်ဆင်ရမလား။
chanterelles ပါသောဤဆန်သည်ရိုးရှင်းပြီးပြင်ဆင်ရန်မြန်ဆန်သည်။ ပိတ်ရက်မှာ မိသားစုစားဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။
400 ဂရမ်။ chanterelles
ကြေကွဲခရမ်းချဉ်သီး၏ 2-3 ဇွန်း
ပွက်ပွက်ဆူနေသောကြက်သားဟင်းရည်6ခွက်
ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်မြိတ်နှင့် ငရုတ်ကောင်းတို့ကို ပါးပါးလှီးပြီး ပါးပါးလှီးထားပါ။ ဆားအနည်းငယ်နှင့်အတူကြော် ငရုတ်ကောင်း နှင့် ဆီ3ဇွန်း နှင့် ဟင်းခတ်အိုးထဲတွင် 10 မိနစ် ပေါင်းပါ။
ထိုအခါ chanterelles ကိုထည့်ပါ။ ထမင်းမထည့်ခင် မိနစ်အနည်းငယ်လောက် ကြော်ပေးပါ။
ထမင်းနည်းနည်း ပေးတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးထည့်ပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်းပဲ အရောင်ခြယ်ထားတဲ့ ကြက်ပြုတ်ရည်ကို ရောမွှေလိုက်ပါ။
အဖုံး နဲ့ တင်ထား တယ်။ အလယ်အလတ်မြင့်မားသောအပူဖြင့်6မိနစ်ချက်ပြုတ်ပါ။. ထို့နောက် ပွက်ပွက်ဆူနေချိန်တွင် အပူကိုလျှော့ချပြီး ၁၀ မိနစ်ခန့် အဖုံးအုပ်ထားပါ။
10 မိနစ်ပြီးနောက် ငါတို့မီးငြိမ်း၊ အိုးထဲမှ ဖယ်ထုတ်ပြီး ဆန်ကို အဝတ်ဖြင့် အုပ်ကာ5မိနစ်ခန့် တည်ထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လုပ်ထားသော chanterelles များဖြင့် ထမင်းကို ကျွေးပါသည်။. ကျန်တာများရှိရင် လေလုံတဲ့ပုံးထဲမှာ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ နှစ်ရက်အထိ သိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဟင်းလျာများ » မှိုနှင့်အတူချက်ပြုတ်နည်းများ » chanterelles နှင့်အတူဆန်
အစပ် chorizo ​​​​နှင့် paprika ပါသောပဲဟင်း